Sefa Dhinda Dhinda uye Molasses Kompositi Kugadzira Maitiro
Sucrose inoverengera 65-70% yeshuga inogadzirwa pasirese. Iyo yekugadzira nzira inoda yakawanda yemhepo uye magetsi, uye inogadzira akawanda masara pamatanho akasiyana ekugadzira pa nguva imwe chete.
Sucrose Chigadzirwa Chinzvimbo muNyika
Kune nyika dzinopfuura zana pasi rese dzinogadzira sucrose. Brazil, India, Thailand neAustralia ndivo vanogadzira uye vanotengesa shuga kunze kwenyika. Kugadzirwa kweshuga kunogadzirwa nenyika idzi kune ma46% ezve kuburitswa kwepasirese uye huwandu hwese hweshuga kunze kwenyika maakaundi angangoita makumi masere muzana ezvekunze. Kugadzirwa kweshuga kweBrazil uye huwandu hwekutengesa kunze kwenyika kutanga munyika, kuverenga 22% ye sucrose pagore kugadzirwa kwepasirese uye 60% yezvose zvinotengeswa kunze kwenyika.
Shuga / Nzimbe Ne-zvigadzirwa uye Kurongeka
Mune mashandiro ekugadzira nzimbe, kunze kwezvakakosha zvigadzirwa senge shuga chena uye shuga tsvuku, pane matatu makuru e-zvigadzirwa: nzimbe bagasse, yekudhinda madhaka, uye blackstrap molasses.
Bagasse ndiyo yakasara ine fibrous kubva munzimbe mushure mekubvisa muto wenzimbe. Nzimbe bagasse inogona kushandiswa zvakanyanya mukugadzira fetereza yemanyowa. Nekudaro, sezvo bagasse ingangoita yakachena cellulose uye iine inenge isina zvinovaka muviri haisi fetiraiza inoshanda, kuwedzerwa kwezvimwe zvinovaka muviri kunonyanya kukosha, kunyanya nitrogen zvinhu zvakapfuma, senge zvigadzirwa zvegirinhi, ndove yemombe, mupfudze wenguruve nezvimwe, kuita izvo kuora.
◇Shuga Mill Press Madhaka:
Dhinda rekudhinda, rakasara rakakura rekugadzirwa kweshuga, ndiwo masara kubva pakurapwa kweshuga nzara nekusefa, kuverenga 2% yehuremu hwenzimbe dzakapwanyika. Inonzi zvakare nzimbe firita yekudhinda matope, nzimbe yekudhinda madhaka, nzimbe firita keke matope, nzimbe firita keke, nzimbe firita madhaka.
Sefa keke (madhaka) inokonzeresa kusvibiswa kwakakosha, uye mumafekitori akawanda eshuga inoonekwa sedongo, ichikonzera matambudziko ehutungamiriri nekurasa kwekupedzisira. Inosvibisa mweya uye yepasi pemvura mvura kana ichizadza firita madhaka chero nguva. Naizvozvo, kudhinda matope kurapwa ndiyo nyaya yekukurumidza yeshuga yekuchenesa uye madhipatimendi ekudzivirira zvakatipoteredza.
Kushandiswa kwefaera yekudhinda matope
Chaizvoizvo, nekuda kwekuti iine huwandu hwakawanda hwezvinhu zvakasikwa uye zvicherwa zvinoda chikafu chekudyara, keke yefauta yatove kushandiswa sefotereza munyika dzinoverengeka, kusanganisira Brazil, India, Australia, Cuba, Pakistan, Taiwan, South Africa, uye Argentina. Yakave ichishandiswa seyakazara kana chikamu chinotsiva mamineral mafetiraiza mune kurimwa kwenzimbe, uye nekurima zvimwe zvirimwa.
Kukosha kweFirita Press Mud seCompost Fertilizer
Iyo reshiyo yeshuga goho uye sefa matope (yemvura zvemukati 65%) ingangoita gumi: 3, ndiko kuti gumi matani eshuga kuburitsa anogona kuburitsa 1 toni yeakaoma firita matope. Muna 2015, huwandu hwese hweshuga pasi rose huri mamirioni 0.172 emabhiriyoni, neBrazil, India neChina zvichimiririra 75% yekugadzirwa kwenyika. Inofungidzirwa kuti angangoita mamirioni 5.2 matani emadhinda ekudhinda anogadzirwa muIndia gore rega rega.
Tisati taziva maitiro enharaunda-ane hushamwari gadzira firita yekudhinda matope kana yekudzvanya keke, Ngationei zvimwe pamusoro pekuumbwa kwayo kuitira kuti mhinduro inogoneka iwanikwe munguva pfupi!
Zvepanyama zvimiro uye makemikari akaumbwa eShuga Press matope:
Yese Volatile Solids
BODI (mazuva mashanu pa27 ° C)
Kuona kubva kumusoro, Press matope ane huwandu hwakakura hwe organic uye mamineral zvinovaka muviri, kunze kwe 20-25% ye organic kabhoni. Dhinda rekudhinda zvakare rakapfuma mu potassium, sodium, uye phosphorus. Iyo ipfuma sosi ye phosphorus uye organic chinhu uye ine hunyoro hwakakura, izvo zvinoita kuti ive yakakosha kompositi fetiraiza! Kushandiswa kwakajairika ndekwe fetiraiza, mune ese asina kugadziriswa uye akagadziriswa fomu. Maitiro anoshandiswa kugadzirisa kukosha kwayo kwefetiraiza
inosanganisira composting, kurapwa nema microorganisms uye kusanganiswa nemidziyo yedhirairi
Molasses ndiyo-chibereko chakaparadzaniswa ne'C 'giredhi shuga panguva yekushomeka kwemakristaro eshuga. Goho remanyowa patani yetani iri mumatanho e4 kusvika ku4,5%. Inotumirwa kunze kwefekitori sechigadzirwa chemarara.
Nekudaro, manyuchi akanaka, anokurumidza sosi yesimba yemhando dzakasiyana dzehutachiona nehupenyu hwevhu mumurwi wemanyowa kana ivhu. Molasses ine 27: 1 kabhoni kune nitrogen ration uye ine 21% soluble kabhoni. Dzimwe nguva inoshandiswa mukubheka kana kugadzira ethanol, sechinhu chinowanikwa mukudya kwemombe, uye se fetiraiza ye "molasses-based".
Percentage yezvibereko zviripo muMolasses
Calcium uye Potassium
Sefa Press Mota & Molasses Kompositi Fertilizer Kugadzira Maitiro
Kutanga iyo shuga yekutsikirira matope (87.8%), kabhoni zvinhu (9.5%) senge hupfu hwehuswa, hupfu hwehuswa, hutachiona hwegorosi, gorosi gorosi, hundi, sawdust nezvimwe, molasses (0.5%), imwechete super phosphate (2.0%), sarufa yedope (0.2%), yakasanganiswa zvakakwana uye yakaunganidzwa yeanosvika makumi maviri emamita pakureba pamusoro pechinzvimbo chepasi, 2.3-2.5m muhupamhi uye 5.6m kukwirira mune semicircle chimiro. (matipi: hupamhi hwehurefu hwemhepo inofanirwa kuenderana iyo paramende data yeiyo compost Turner yauri kushandisa)
Iyi mirwi yakapihwa nguva yekuumbwa uye kupedzisa maitiro ekugaya kwemazuva angangoita gumi nemana kusvika gumi nemana. Munguva yekuunganidza, musanganiswa wacho wakasanganiswa, wakashandurwa uye ukadiridzwa mushure memazuva matatu ega ega kuchengetedza hunyoro hwe50-60%. Iyo kompositi Turner yaishandisirwa kutendeuka maitiro ekuchengetedza kufanana uye kunyatso sanganisa. (matipi: kompositi vhiri rinotenderera rinobatsira fetiraiza kusanganisa nekushandura manyowa nekukurumidza, kuve unoshanda uye unodikanwa mumutsara wekugadzira fetiraiza)
Kana hunyoro hwakawanda kwazvo, iyo nguva yekuvira inowedzerwa. Mvura yakadzika yemumadhaka inogona kukonzeresa kuvirisa. Maitiro ekutonga kana kompositi yakura? Kompost yakakwenenzverwa inoratidzirwa neakasununguka chimiro, grey vara (yakasungirirwa mu taupe) uye hapana hwema. Kune tembiricha inowirirana pakati pemanyowa nenzvimbo dzakatipoteredza. Hunyoro hwehunhu hwusingasviki makumi maviri kubva muzana.
Izvo zvinhu zvakaviriswa zvino zvinotumirwa ku Nyowani organic organic fetiraiza yekuumbwa kwemagirosa.
◇Kuomesa / Kutonhora
Iyo granules ichaendeswa kune iyo Michina dhiramu kuomesa muchina, pano mamorelasi (0,5% yezvinhu zvese zvakasvibirira) nemvura inofanira kumwayiwa usati wapinda pakaoma. Rotary drum dryer, inotora tekinoroji yepanyama kuomesa granules, inoshandiswa kugadzira granules patembiricha ye 240-250 ℃ uye kudzikisira hunyoro kusvika ku10%.
Mushure mekudyara kwemanyowa, inotumirwa ku muhombe dhiramu chinovhara muchina. Avhareji saizi yeiyo bio-fetiraiza inofanirwa kunge iri ye5mm dhayamita kuti murimi asununguke uye yakanaka mhando granule. Oversize uye undersize granules inoshandiswazve kune granulation unit.
Chigadzirwa chehukuru hunodiwa chinotumirwa ku otomatiki kavha muchina, uko kwakarongedzwa mumabhegi kuburikidza nekuzadza auto. Uye zvino pakupedzisira chigadzirwa chinotumirwa kunzvimbo dzakasiyana yekutengesa.
Shuga Sefa Matope & Molasses Kompost Fetiraiza Zvimiro
1. Kurwisa zvirwere zvakanyanya uye masora mashoma:
Munguva yeshuga firita yekurapa matope, zvidiki zvinowanda nekukurumidza uye zvinogadzira huwandu hwakawanda hwemishonga inorwisa mabhakitiriya, mahormone uye mamwe mametabolites. Ikaisa fetiraiza muvhu, inogona kudzivisa kutapukira kwezvirwere uye kukura kwemasora, kugadzirisa zvipukanana uye kusagadzikana kwezvirwere. Iyo nyoro firita matope isina kurapwa iri nyore kupfuudza hutachiona, mbeu yemasora nemazai kuzvirimwa uye kukanganisa kukura kwavo).
2. Huru fetiraiza kunyatsoshanda:
Sezvo nguva yekuvirisa ingori mazuva 7-15 chete, inochengeta firita yemadhaka zvinovaka muviri sezvazvinogona. Nekuda kwekuora kwehutachiona, inoshandura izvo zvinhu zvakaomarara kupinza mune zvinovaka muviri zvinovaka. Iyo firita yehuga yemadhaka bioorganic fetiraiza inogona kutamba mu fetiraiza kushanda nekukurumidza uye kuzadza zvinovaka muviri zvinodiwa pakukura kwezvirimwa. Naizvozvo, kugona kwefetiraiza kunochengeta kwenguva yakareba.
3. Kurima ivhu rakaorera nekuvandudza ivhu:
Uchishandisa fetereza imwe chete yemakemikari kwenguva yakareba, ivhu rinogadzirwa nezvinhu rinodyiwa zvishoma nezvishoma, izvo zvinoita kuti huwandu hwevhu hunobatsira hutachiona hutete. Nenzira iyi, enzyme zvemukati zvinoderedza uye colloidal yakanganisika, zvichikonzera kuumbana kwevhu, acidification uye salinization. Sefa matope ehupenyu fetiraiza inogona kusanganisa jecha, ivhu rakasununguka, inhibit zvipembenene, kudzoreredza ivhu micro-ecological nharaunda, inowedzera kukwana kwevhu uye kugadzirisa kugona kuchengetedza mvura uye zvinovaka muviri.
4. Kuvandudza goho uye mhando:
Mushure mekuisa fetiraiza yembeu, zvirimwa zvine midzi yemidzi yakasimbiswa uye masisitimu akasimba emashizha, izvo zvinokurudzira kumera kwezvirimwa, kukura, kutumbuka, kubereka uye kukura. Iyo inovandudza zvakanyanya kutaridzika uye ruvara rwezvirimwa zvigadzirwa, inowedzera huwandu hweshuga uye kutapira kwemichero. Sefa matope bio-organic fetiraiza anoshandisa sebasal general uye yepamusoro kupfeka. Mumwaka wekukura, isa shoma shoma inorganic fetiraiza. Inogona kusangana nezvinodiwa zvekukura kwezvirimwa uye inosvika pachinangwa chekugadzirisa nekushandisa ivhu.
5. Wide kushanda mune zvekurima
Uchishandisa sepasi fetiraiza uye topdressing yeshuga, mabhanana, michero, manwi, miriwo, tii chirimwa, maruva, mbatatisi, fodya, furuji, nezvimwe.